Baobab+ sy ny Mvola : hamoraina ny herinaratra avy amin’ny masoandro | NewsMada
Baobab+ sy ny Mvola : hamoraina ny herinaratra avy amin’ny masoandro
Miara-miasa ny Baobab+ Madagascar sy ny Mvola, amin’izao fotoana izao hamatsiana ny angovo avy amin’ny masoandro, indrindra any amin’ny faritra ambanivohitra, izay mbola sarotra ho an’ny tokantrano maro ny manam-bola ho an’izany herinaratra izany. Manisy petra-bola voalohany 30.000 Ar ny mpanjifa, anjarany avy eo ny mandoa tsikelikely, isan’andro na isan-kerinandro, araka izay fahafahany. Miankina amin’izay fahafahany izay ny fahazoany mampiasa ny tolotra omena azy, 24 ora raha kely indrindra, ary miafara amin’ny fananany manokana ilay fitaovana.
Herintaona amin’ny ankapobeny ny fandoavana izany vola izany, tombony lehibe ho an’ny tokantrano isanisany sy amin’ny asa ataony mampidi-bola ho azy. Ohatra, mitombo 75 % ny fotoana fahafahan’ny ankizy mianatra ; mitombo 25 % ny vola miditra amin’ilay tokantrano ; 94 % ireo mahita fa mihatsara ny fiarovana ny tanànany ; 84 % ny mahatsapa fa mihamadio ny rivotra iainany, sy izay mety ho tombontsoa maro hafa.
Efa nanao fampindramam-bola ho famatsiana fitaovam-pianarana ny Baoba+, koa amin’izao fiaraha-miasa amin’ny Mvola izao, azon’ny rehetra atao ny mamerina izany vola izany, tsy misy sarany fanampiny, na aiza na aiza eto amin’ny Nosy. « Izao fiaraha-miasa izao, manampy bebe kokoa hatrany ny mpanjifa manerana ny Nosy, manatsara ny fari-piainan’izy ireo, amin’ny fahazoana herinaratra ho takatry ny rehetra », hoy ny talen’ny Baobab+ Madagascar, i Olivier Mutsaerts.